Insiza Yemibala Yemibala Yemvelo China Manufacturers & Suppliers & Factory
Insiza Yemibala Yemibala Yemvelo - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 18 ye-Insiza Yemibala Yemibala Yemvelo)
Insiza ye-Carbon fiber sheet yokusika insiza
Insiza ye-Carbon fiber sheet yokusika insiza Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane komoya...
Izinsizakalo zokusika ezenziwe nge-carbon fiber sheet / panel cnc
Izinsizakalo zokusika ezenziwe nge-carbon fiber sheet / panel cnc Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu- 400x500mm . Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti engilazi...
I-Model No.: HCA001
Izingxenye zemishini ye-anodized aluminium cnc machining / amasethingi e-CNC wokucacisa okuphezulu okujwayelekile Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC zincane ekuxineni, zilula ngesisindo, zithambile futhi kulula ukuzicubungula. Enye yezimpawu ze-aluminium alloys ukuthi bakha ifilimu elikhudlwana le-oxide ngaphezulu lapho...
Insiza eshibhile yekhabhoni ye-carbon fiber cnc eduze kwami
Insiza eshibhile yekhabhoni ye-carbon fiber cnc eduze kwami Cishe i-3k twill matte Carbon Fiber Sheet, inamandla futhi ilula. Imvamisa sinobukhulu ukusuka ku-0.3mm kuya ku-13.0mm, ikakhulukazi siqinile emkhakheni weC CNC Carbon Fibre usike Service. Izitokwe zethu ezijwayelekile zamashidi kufaka phakathi amashidi e-...
Insiza Yemibala Yemibala Yemvelo Imibala Yemibala Round Round Imidwebo Yemibala Yamapulangwe Washer enemibala enemibala Intaba enemibala ye-Aluminium Gimbal Iziteyizi ezinemibala eqondile Ishidi Elimibalabala Le-Carbon Fibre Insiza Yezemishini ye-CNC